Yonke into ekufuneka uyazi malunga nesicoci seRobhothi - Izixhobo
Uthando Lwezesondo Ulusu Iindaba Zefashoni Amanqaku Omfazi Ombane Uhlobo Lweceleb Kwiindaba Ulwazi Kunye Nemfundo Iincwadi Itekhnoloji Kufuneka Ubone
Yonke into ekufuneka uyazi malunga nesicoci seRobhothi
Ucoceko belusoloko lubaluleke kakhulu, kodwa aluzange ngaphambili lube nenxalenye enkulu kwiincoko zethu zemihla ngemihla. Ukugcinwa kwendlu kubalulekile ukugcina ujongo lwekhaya lakho kunye nokulikhusela ekungcoleni, kwiibhaktheriya nakwizifo. Kungumsebenzi onzima, kwaye njengoko abantu befumana ngakumbi nangakumbi malunga nexesha elifunekayo elichithwe ukucoca, ukuxhomekeka kwethu kwitekhnoloji kukhule ngokuphindaphindiweyo. Cue ukwazisa, iirobhothi vacuums - isixhobo esitsha sokucoca esithi masenze ubomi bethu bube lula.
Izikhuselo zeerobhothi ziya zithandwa phakathi kweentsapho kwaye zithengiswa ngokukhawuleza. Sele kukho izigidi zeeyunithi ezisebenzayo kwihlabathi liphela. Uyilo lwamva nje lwerobhothi ziimayile ukusuka kwezo zingaphambilana, ezaphehlelelwa ekuqaleni kwenkulungwane. Kule minyaka imbalwa idlulileyo ndibone i-robo-vac iba yiyo yonke ingqumbo!
Khetha Umzekelo wakho ngononophelo
Nangona ukusebenzisa iirobhothi kungasiphelisi ngokupheleleyo isidingo sokucoca kunye nokusula ngendlela yesiko, kufuna ukuqhuba okuncinci. Nangona kunjalo, ngaphambi kokuba uthenge isicoci, kufuneka ujonge imodeli, wenze kunye noyilo ukwenza umsebenzi wakho ube lula. Uninzi lwee-robo-vacs lunokulawulwa nge-app ye-smartphone, ebonisa imephu edityanisiweyo yekhaya lakho eya kuthi ikuthumele izilumkiso ngempazamo ukuba irobhothi yakho isengxakini.
Qwalasela ubungakanani, ukusebenza ngokukuko kunye nokuSebenza
Enye yezinto ezibalulekileyo ekufuneka igcinwe engqondweni bubungakanani bendawo oza kusetyenziswa kuyo. Kuyafuneka ukuba izithuba zibe ncinane kwisithuba sokuvala indlu yonke. Elona xesha liphezulu lentlawulo lifunekayo kuyo nayiphi na i-robo-vac yimizuzu engama-90. I-vacuums ayixhotyiswanga ukwenza izinyuko. Ngokumalunga nomgangatho, zisebenza ngcono kumgangatho onzima weetayile. Irobovac ibaluleke kakhulu xa unokuba nesilwanyana sasekhaya esichitha kakhulu.
Ezinye iingenelo kunye neengozi
Izikhuselo zeerobhothi bezikho kangangesithuba seminyaka elishumi eziqinisekisa ukuvela kwazo kwiindawo ezininzi. Ikwathetha ukuba kukho iindlela ezingabizi kakhulu esinokuthi sizithenge ngoku. Sidibanise uluhlu lwezinto eziluncedo kunye nezibi ukukunceda uthathe isigqibo sokuba ngaba utyalomali kwi-robo-vac kufanelekile.
Iyanciphisa ixesha lokucoca
Ineendlela zokucoca ezicwangcisiweyo
Icwecwe ngobungakanani, iyaphatheka kwaye ifuna indawo encinci
Umshini weRobot ucoca iindawo ezininzi
Kule mihla bakwanobuhlobo ekhaya
Ayisiyongxolo njengokuphefumla okuqhelekileyo
Isebenza ngokukodwa kumgangatho wenqanaba
Ezi zithuba ziyabiza
Kunyanzelekile ukuba izindlu zirobhothi zilungile
Ubomi bebhetri obuphantsi.
Imicimbi yabucala ehlekisayo.
Ubomi bethuba elingena ndawo iirobhothi linokuba naphakathi kweminyaka emine ukuya kwemithandathu, ngokuxhomekeke kuhlobo, imodeli kunye nolondolozo Isicoci seerobhothi songeza ixabiso kwikhaya lakho nakwixesha lomntu- ngaphandle kokuba into yakho iyacoca!
Izikhuselo zeerobhothi zilungile kwaye ziyahambelana. Ngenxa yoko, abathathi indawo eninzi. Ukuba uchithe iiyure ubukele iiJetsons ebuntwaneni bakho kunokwenzeka ukuba ubambe iingcinga ezithile zeRosie aka AI. Nangona kunjalo, iirobhothi azikafikeleli kwelo phawu okwangoku, kungekudala ziya kuthatha indawo yokuma nkqo kunye nayo yonke imisebenzi yayo. Ukuqukumbela, i-robo-vac yeyakho ukuba uxakekile, unezilwanyana zasekhaya kunye nabantwana, kunye / okanye ufuna indawo encinci etofwayo.
Funda kwakhona: Ikhibhodi engenazingcingo okanye ikhibhodi enentambo?
Izigaba Iincwadi Amanqaku Omfazi Ombane Iinto Zokuzilungisa
Unyango lwasekhaya lokususa iinwele ngokusisigxina
Imiboniso bhanyabhanya ephezulu yothando yasehollywood ngo-2016
Unyango lwasekhaya lokufumana iinwele
Eyona bhanyabhanya yosapho yexesha lonke
Umdlalo ogqibeleleyo womfazi we-libra